मन्त्रीको तलब ७२ हजार ७३०, सांसदको कति पुग्यो ? - Nagarik Today
होम » मन्त्रीको तलब ७२ हजार ७३०, सांसदको कति पुग्यो ?
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यान्वयन भएसँगै सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधामा समेत वृद्धि भएको छ । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमार्फत कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक २ हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार पदाधिकारीहरुको तलबमान समेत वृद्धि भएको छ ।
उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले समान ७२ हजार ७३० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । संघीय सांसदको तलब भने ६६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब ६९ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रध्यानन्यायाधीशले मासिक ८८ हजार ९५० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् । न्यायाधिशको तलब ७३ हजार ९५० रुपैयाँ रहेको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब ७० हजार १ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । निजामती, सुरक्षा तथा शिक्षकहरुको बढेको तलब भने अर्थले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रीको तलब ७२ हजार ७३०